Madaxweynaha Puntland oo ka soo laabtay socdaal dheer - BBC News Somali
Madaxweynaha Puntland oo ka soo laabtay socdaal dheer
14 Oktoobar 2010
Madaxweynaha Puntland Cabdiraxman Sh.Maxamed ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Garowe ka dib socdaallo uu ku tegay dalalka Ethiopia, Djiboutii iyo Yamen halkaas oo sida uu sheegay uu u tegay arrimo kala duwan oo la xiriira iskaashiga xagga ammaanka, ganacsiga iyo qodobbo kale isagoo tilmaamay in kulmadii uu la yeeshay madaxda dalalkaas ay guul ku dhamaadeen.
Madaxwayne Cabdiraxmaan Sh. Maxamed wuxuu dalka ka maqnaa muddo bil iyo bar ah, waxaana socdaalkiisa ku wehliyay wasiirka arrimaha gudaha Cabdullahi Axmed Jaamac iyo la taliyihiisa Cali Cabdi Awaare waxaana garoonka Conoco ku soo dhoweeyay masuuliyiin fara badan oo dawladda ka tirsan iyo dadwayne. Markii uu soo gaaray xarunta madaxtooyada Madaxwayne Cabdiraxmaan wuxuu halkaa ku qabtay kulan ay ka qaybgaleen xubnaha golayaasha dawladda, wuxuuna warbixin kooban ka bixiyay dalalkii uu soo maray iyo waxyaabihii uu kala kulmay madaxdii dalalkaas ee uu la kulmay iyo ujeeddada uu markii horeba safarka u galay.
Xiriirka caalamiga iyo la socodsiinta adduunka arrimaha ka taagan Puntland iyo mowqifka Puntland ee xaaladda Soomaaliya, ayuu Madaxwaynuhu ku tilmaamay in ay ahaayeen qodobada ugu muhiimsan ee dhaliyay socdaalkiisa.
Madaxda dalalka Ethiopia iyo Djibouti iyo weliba wakiillada dalalka caalamka ee daneeya Soomaaliya ayuu sheegay Madaxwayne Cabdiraxmaan Sh.Maxamed inuu kula kulmay Adis-ababa iyo Djibouti isla markaasna ay ka wada hadleen xaaladda nabadgelyo ee gobolka gaar ahaan Puntland iyo arrimihii ugu dambeeyay.
Marar kala duwan ayuu Madaxwaynaha Puntland socdaal ku tegay dalalka Ethiopia iyo Djiboutii, hase ahaatee waa markii ugu horraysay ee booqasho uu ku tago dalka Yeman, isagoo tilmaamay in Madaxwaynaha Yeman Cali Cabdalla Saalax iyo masuuliyiintii uu la kulmay ay isla soo qaadeen iskaashi wejiyo kala duwan leh oo ay ka mid tahay ammaanka, burcad-badeedka iyo tahriibta.
Wuxuu sheegay in dawladda Yeman ay Puntland ka furan doonto qunsuliyad, isla markaasna uu dhowaan dalka soo gaari doono wakiil rasmi ah oo Yaman ka socda isagoo dhinaca kalana tilmaamay in wafdi ballaaran oo ka socda Puntland uu dhowaan u ambabixi doono dalka Yeman.
Madaxwaynaha Puntland wuxuu soo dhoweeyay go'aankii ay dhowaan dawladda maraykanku ku sheegtay inay wax ka beddelayso siyaasadeeda Soomaaliya, isla markaana ay si dhow ula shaqayn doonto Puntland iyo Somaliland iyo shirkii carabta ee dhowaan lagu qabtay dalka Masar.
Arrimaha burcad-badeedka oo uu soo qaaday Madaxwayne Cabdiraxmaan wuxuu sheegay in Puntland ay dagaal adag kula jirto burcadda badaha, hase ahaatee caalamku aanu ka gaysan gacantii looga fadhiyay.